မေ့မရသော အလွမ်း – Hlataw.com
စာရေးသူ ကငယ်ငယ်ကဝါသနာရှင်တယောက်ပေါ့.. အချောင်းကောင်း၍ ဖရီးစားရသောအခါများလည်းကြုံဖူးပါသည်.. ဒီဇာတ်လမ်းလေးက(၁၉၉၆)လောက်က .အတွေ့အကြုံလေးကိုအခြေခံပါသည်… ..ခုခေတ်ကတိုက်ခန်းတွေများ၍ချောင်းဖို့ကသိပ်မလွယ်တော့ပေ… ..လှိုင်သာယာမြို့သစ်စပေါ်ပီးနောက်မြို့သစ်အစွန်းပိုင်းများတွင်တနေ့လုပ်တနေ့စားများ စုပီးနေကြသောရပ်ကွက်တခုရှိသည်. .ပေ၂၀ကိုတအိမ်ဆောက်နေကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ..
အိမ်ရှင်အများစုက ဆယ်ပေတခြမ်းကိုထရံကာပြီးငှါးစားကြသည့်အချိန်..ပေါ့.. (မင်းမင်း…နယ်ကတက်လာပီး..ရန်ကုန်မှအသိတယောက်ဆီမှာတည်းခိုရင်းအလုပ်ရှာသည်.. လှိုင်သာယာကစက်ရုံတခုမှာအလုပ်ရ၍..အလုပ်နှင့်နီးသော ထိုရပ်ကွက်တွင်အိမ်ငှါးနေရန်ရှာရပါတော့သည်). .အကျင်းချုပ်ပြောရရင်တော့.. ဆယ်ပေခန်းလေးရတာပေါ့ဗျာ.. ခေါင်းရင်းခန်းအိမ်ငှါးက.. လင်မယား..ခလေးကမရှိကြသေး.. မင်းမင်းကခြေရင်းခန်းမှာနေသည်.. ကိုကျော်ကြီးနှင့်မထား..ကလင်မယား.. ကျော်ကြီးမှာကားစပါယ်ယာဖြစ်သည်.. ..မထားမှာမင်းမင်းနှင့်တစက်ရုံထည်းအတူလုပ်ကြ၍မင်းမင်းနှင့်သိကြကာ သူတို့ခြေရင်ခန်းငှါးမည်ဟု. အိမ်ရှင်က ပြောသဖြင့် မင်းမင်းငှါးနေရန်အဆင်ပြေသွားလေသည်… ..အလုပ်ဆင်းချိန်လိုင်းကားစီးလျှင်မထားနှင့်မင်းမင်း ဆုံတတ်ကြသည်.. မထားမှာလင်ရှိပေမဲ့..အပျိုအတိုင်းပင်.. သင်ဇာဝင့်ကျော်လို ကိုယ်အနေအထားမျိုး..အသားအရည်ဝင်းဝါသည်.
.နှာတံသွယ်မျက်နှာဝိုင်းလေးနှင့်ကြည့်ကောင်းလှသည်.. သူမကိုစသိချိန်က အပျိုထင်၍ မင်းမင်း.. စကားဝင်ရောမိတ်ဆက်ပီး ခင်အောင်လုပ်ခဲ့သည်..လင်ရှိသည်ဟုသိရ၍..အနေအထိုင်ဆင်ခြင်လိုက်ရသည်.. ခုတော့ တအိမ်ထည်း မှာတခြမ်းစီနေကြသဖြင့် မင်းမင်းကျေနပ်နေမိသည်… အိမ်ပုံစံက သစ်သားအိမ် အလည်က ထရံတောက်လျှောက်ကာထားသည်.. ရေချိုးလျှင်နောက်ဖေးမှာ ချိုးကြသည်.. အိမ်ရှေ့ခန်း အိပ်ခန်းရှိပီး မီးဖိုချောင်မရှိပါ..အိမ်သာမှာတခုထည်းရှိသည်..ထမင်းဟင်းချက်လျှင် ရေကပြင်မှာပဲ ချက်ကြပီး..ရေချိုးနေရာနှင့်အိမ်သာမှာဆယ်ပေလောက်သာကွာသည်…
မင်းမင်းထိုအိမ်မှာစနေတဲ့နေ့မှာချောင်းဂွင်ရလေသည်.. နောက်ဖေးမှရေချိုးသံကြားလိုက်ရသည်.. မင်းမင်းအိပ်နေရင်း ထရံကြားမှချောင်းလိုက်ရာမထားဖြစ်နေသည်..ရေဆေးငါးကြီးလို..ဝင်းပြောင်နေသည်. .ရေစိုထမိန်ကြောင့်တင်းရင်းနေတဲ့တင်သားကြီးကြားကို ထမိန်အပြင်မှနေ၍ပွတ်တိုက်နေသည်.. ဖင်ကြားညပ်ပုံစံကြောင့်မင်းမင်းလီးထတောင်လေသည်.. ထမိန်ပြန်ပြင်၍ဝတ်ဖို့ခါလိုက်ရာ.. ဘေးတိုက်မြင်ရသောမြင်ကွင်း.. ကောက်ကြောင်းလှလိုက်တာ..နို့သားမှာလုံးပီး အပေါ်ဘက်ကော့တက်နေသည်..ီဆီးခုံနှင့်ဗိုက်တသားထည်း.. တင်လေးကကောက်လို့.လှနေသည်.. သူမလင်ကျော်ကြီးမှာ စပယ်ယာဖြစ်၍အစောကြီးအလုပ်ထသွားသည်..တနင်္ဂနွေတရက်ပဲနား​လေသည်.. ခုကျော်ကြီးမရှိ အလွတ်ချောင်းလို့ရပေပီ.. သူမရေချိုးပီးအဝတ်လဲဖို့လုပ်နေသည်.. မင်းမင်းအခန်းဘက်မှာပြတင်းပေါက်မရှိ၍ အမှောင်ခန်းလိုဖြစ်နေသည်..မထားအခန်းမှာ ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ထား၍ မနက်အလင်းအောက်မှာပေါ်တင်ကြီးမြင်ရသည်..
သူမ ထမိန်ချွတ်ချလိုက်ရာ စောက်မွှေးယေးယေးနှင့် အဖုတ်ကိုမြင်ရသည်.. အလုပ်သွားအဝတ်ကိုကုန်းယူလိုက်စဉ်. ဖင်နောက်မှပြူးထွက်လာသောအဖုတ်နောက်ပိုင်းနှင့် အညိုရောင်ခရေပွင့်စအိုလေးမှာ လိုးချင်စရာပေ..တင်သားကြီးများမှာပြတင်းအလင်းရောင်ကြောင့် တင်းပြောင်နေသည်..မထား အသားအရည်မှာဝါညက်ညက်နှင့်အင်မတန်အိစက်နေမှာဖြစ်သည်.. ဒီလိုဖင်နှင့်အဖုတ် ကိုရထားသောကျော်ကြီး ဘလိုများလိုးမလည်းကြည့်ချင်လာမိသည်.. မင်းမင်းလည်းအလုပ်သွားရမည်.. မနက်ခင်းဂွင်းထုလျှင်အလုပ်မလုပ်နိုင်မှာစိုး၍စိတ်လျှော့လိုက်ပီး အလုပ်သွားရန်ပြင်ရပါတော့သည်…
..ကားမှတ်တိုင်တွင်အလုပ်သွားမည့်သူများအုံခဲနေသည်..ကားကမလာသေး.. ထိုလူအုပ်တွင်မိန်းခလေးများ ပိုများသည် အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့်နီးသောကြောင့်ဖြစ်ည်.. ထိုခေတ်က ဝိုင်ဘီအက် ဟီးနိုးကားများမရှိသေးပါ.. ချက်ကြီး ခေါ်ဘက်စ်များသာရှိသည်.. ကားအလွန်ကြပ်သဖြင့်မိန်းခလေးများအတွက် အဆင်မပြေ​ပေမဲ့ယောက်ျားများအတွက်သာယာလေသည်. .ထောက်ဂွင်ဖြစ်သည်.. မထား နှင့်မင်းမင်းမှာ ဘေးချင်းကပ်ရပ်နေကြသည်.. ဘက်စကားရောက်လာသည်..ကြပ်နေသည်..အလုအယက်ဝိုင်းတက်ကြသည်.. “မထားမြန်မြန်လာအလုပ်နောက်ကျမယ်” မင်းမင်းအရှေ့မှတိုးဝှေးတက်သွားသည် မထားအနောက်ကကပ်တိုးလိုက်လာသည်..
အလည်လောက်တွင်တိုးမရတော့ပါ.. မထားရဲ့နို့နှစ်လုံးမှာ..သူ့ကျောကုံးကိုလာဖိမိနေသည်..အိစက်နေတာပဲ.. ကားလှုပ်တိုင်းနို့နှင့်ကျောပွတ်နေရတာဖီးကောင်းလွန်းသည်.. ဆင်းဖို့မှတ်တိုင်နီးလာသဖြင့်မထားဆင့်ဖို့တဖတ်လှည့်လိုက်သည် မင်းမင်းလည်းလိုက်လှည့်သဖြင့်.. ဖင်ကွဲကြားနှင့်လီးထောက်မိတော့သည်.. ရေချိုးပီးမြင်ထားသော ဖင်ကြီးကိုထောက်မိနေသလို နို့နဲ့အပွတ်ခံရ၍..လီးက အတွင်းခံထဲမာတင်းနေသည်… မတတ်နိုင်ဘူး ကားကြပ်တာကိုး.. အရှေ့မှမထားငြိမ်နေသည်.. မင်းမင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ် လီးကိုဖင်နဲ့အကြိမ်းထောက်လိုက်ရာ သုတ်ရည်များပင်ထွက်နေတော့သည်…
“မထား တိုးတော့ ရောက်ပီ” မင်းမင်းသူမပုခုံးလေးကိုလှုပ်ပြောတော့မှ..တိုးဖို့သတိရတော့သည်… ကားပေါ်ကဆင်းပီး ဘေးကပ်လမ်းလျှောက်နေစဉ်.. “မထား နင်က တကယ့်အပျိုအတိုင်းပဲနော်..ကလေးမယူဘူးလား” မထားပြန်မဖြေခေါင်းငုံ့လျှောက်နေသည်. မင်းမင်းစိတ်မလုံဖြစ်သွားသည်.သူလီးထောက်တာစိတ်ဆိုးသွားပီထင်၍.. “မထား င့ကိုခွင့်လွှတ်ပါဟာ.ကားကြပ်လို့ထောက်မိတာပါ.” ထိုအခါမှ..မထားက.. “မတော်လို့ဖြစ်တာပဲ..ခွင့်လွှတ်ပါတယ်”. . နှစ်ယောက်သားဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ. ခပ်ခွာခွာ အလုပ်ဆက်သွားကြတော့သည်…
.မထားတနေ့လုံးအလုပ်လုပ်၍မရပါ.. မင်းမင်းနှင့်အလုပ်ထည်းတခါတလေတွေ့မိလျှင် ကားပေါ်မှာအဖြစ်ကိုပြန်သတိရပီး. ပေါင်ကြားထည်းယားနေသလိုခံစားနေရသည်.. …အလုပ်အိမ်သာထည်းသေးပေါက်သွားလျှင်အစိလေးကိုပွတ်၍ခဏလောက်ကစားပြီး.. ကာမစိတ်နိုးထနေတတ်သည်… ဒီနေ့ညတော့ယောက်ျားကို လိုးခိုင်းဖို့တွေးနေမိလေသည်… …ထိုခေတ်အချိန်သည်အပြာဗီဒီယိုများအလွယ်တကူကြည့်လို့မရပေ.ခက်ခဲသောကာလဖြစ်သည်.. အပြာစာအုပ်နှင့်အပြာကာတွန်းများသာခက်ခက်ခဲခဲဝယ်ဖတ်ကြရသည်..
မင်းမင်း မထားဖင်နှင့်စဖု ကိုသာမြင်ယောင်နေမိ၍လီးလည်းတောင်နေသည်.. ဖတ်ဖူးသောအပြာစာများအတွင်းမှလိုးနည်းများကိုပြန်မြင်ယောင်ပီးမထားကို လိုးဖို့အကြံထုတ်နေမိသည်.. ..အလုပ်ပြန်ချိန်ရောက်လေပီ..ထုံးစံအတိုင်းကားကြပ်ကြပ်တိုးစီးပြန်ရ၍မထားများရှိနေမလား.. ရှာကြည့်သေးသည်.. မတွေ့ပါ..ဘယ်အချိန်ပြန်သည်မသိလိုက်.. ..စနေနေ့မို့ မထားစောစောပြန်သွားသည် လင်တော်မောင်စပါယ်ယာကျော်ကြီးအလုပ်အစောပြန်တတ်သည်..မင်းမင်းအိမ်ပြန်မရောက်ခင် စောစောခံချင်လို့ဖြစ်သည်.. ..မထား တွေးမိပါသည်..ခြေရင်းခန်းမှာပြတင်းပေါက်မရှိပေ.. အိမ်ရှေ့ခန်းနှင့်နောက်ဖေးခန်းထရံကာ ခွဲထား၍မီးမထွန်းလျှင်မှောင်နေတတ်သည်..
မင်းမင်းအိပ်ခန်းနှင့်သူတို့အိပ်ခန်းမှာထရံတချပ်သာခြားသည်. .ချောင်းကြည့်လျင်မြင်နိုင်သည်.. ထို့ကြောင့်စက္ကူများသတင်းစာများကပ်ထားရသည်.. ယခု သူမ အိမ်အရင်ဆုံးရောက်သည် လင်က မရောက်သေး မင်းမင်းလည်းပြန်မလာသေးပါ.. ထို့ကြောင့် သူမအဝတ်လဲရင်း သတင်းစာလွတ်နေသောနေရာတချို့မှခြေရင်းခန်းကိုခြောင်းကြည့်လိုက်သည်.. မင်းမင်းအိပ်ယာနှင့်အဝတ်အစားများတွေ့ရသည်..မင်းမင်းချောင်းလျှင် သူမ ကိုမြင်မှာသေခြာလေပီ.. “သူင့ကိုချောင်းသေးလား..ဟုတွေးမိရင်းရင်ခုန်နေမိသည်.. ထိုစဉ် ကျော်ကြီးပြန်ရောက်လာလေသည်.. “ဟာ..မိန်းမ အစောကြီးရောက်နေပါလား” “ဟုတယ်..ကိုကျော်..အလုပ်နည်းလို့ခွင့်တောင်းပီးပြန်လာတာ..” မထား သူ့လင်ကိုဖက်လိုက်ပီး.. “ကျမ ခလေးလိုချင်တယ် ရှင်ဒီနေ့ကြိုးစားပေး..” “အင်းပါ မိန်းမရယ် လာခုပဲစရအောင်” ကျော်ကြီးနှင့်မထားအဝတ်များချွတ်ချလိုပ်ပီး အိပ်ယာပေါ်လှဲလိုက်သည်..
“ရှင့် သုတ်ရည်ကို အပြင်မထုတ်နဲ့နော်ခလေးယူမယ်” သူတို့လင်မယား ကွန်ဒုံးသုံးနေတာကြာပါပီ. .ငွေကြေးမပြည့်စုံသေး၍ ခလေးမရအောင် သုံးခြင်းဖြစ်သည်..မထားတားဆေးမသောက်ချင်ပါ ရာသီမလာလျှင်အသားအရည်မွဲခြောက်မှာစိုးလို့ဖြစ်သည်.. ကျော်ကြီးမှာ အိမ်ငှါးဘဝနှင့်ကလေးယူရမှာတွေးပူနေမိသည် ထို့ကြောင့် လိုးတိုင်းကွန်ဒုံးသုံးနေရ၍စပတ်အရသာကို ကောင်းကောင်းမခံစားရ..မထားလည်းထို့အတူပင်..သူမ မှာမပီးခင် ယောက်ျားက ကွန်ဒုံးထဲမှာပီးချသဖြင့်သုတ်အရသာကိုမခံစားရပေ.. ဒီနေ့မထားအရမ်းထန်နေသည်.. ပက်လက်ပေါင်ကားပေးလိုက်သည်.. ကျော်ကြီး လီးမှာ ၅လက်မလောက်သာရှိသည် တဆုံးထည့်လိုးမှသာ သားအိမ်နားထိရောက်သည်.. မထားရဲ့နို့ကလေးများကို ဆွဲစုပ်နေရင်း လီးကိုမသွင်းသေးပဲ စပ အပေါ်သို့ အမြောင်းလိုက်ပွတ်ရင်း လီးပိုတောင်အောင်လုပ်နေသည်..
စပါယ်ယာအလုပ်မှာပင်ပန်းလှ၍..လီးမှာချက်ချင်းမတောင်နိုင်ပါ.. လိုးချင်သော်လည်းလီးကမလိုက်နိုင်ဖြစ်နေသည်.. “မိန်းမ..စုပ်ပေးဟာ..မတောင်နိုင်ဘူး..” ကျော်ကြီး ပက်လက်လှန်လိုက်သည်.. မထား သက်ပြင်းချရက်ထလိုက်၍ ကျော်ကြီးပေါင်ကြား ဒူးထောက်ထိုင်ကာ လီးကိုအရင် ဂွင်းကစားလိုက်သည်.. “ရှင်အားဆေးသုံးသင့်တယ်..” “အေး..ငါဝယ်ဖို့မေ့နေတာ..စုပ်ပါတော့ဟာ.အာ့မှထောင်လာမှာ..” မထားဖင်ဘူးတောင်းထောင်ကာ စုပ်ပါတော့သည်.. ပြွစ်..ပြွစ်..အင်း..ကောင်းတယ်မိန်းမရေ.. မထား လျှာကလေးနှင့်လီးဒစ်လေးကို မွေ့ကစားလိုက်ရာ လီးမှာထောင်လာတော့သည်.. မထားမအားနိုင်တော့ပါ ဘယ်လက်ကလီးကိုကိုင်၍စုပ်နေပီး.. ညာလက်က ဗိုက်အောက်လျှို၍ လက်ခြောင်းများက အဖုတ်ထဲထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်ကစားနေတော့သည်…
အွင်း..အ့..ပြွစ်ပြွစ်..ရှီး…အ့.. … မင်းမင်းအိမ်ပြန်ရောက်လာသည်.. မထားအိမ်ရှေ့ဘက်ကြည့်တော့ယောက်ျားဖိနပ်တွေ့ရ၍ ကျော်ကြီးရောက်နေတာသိလိုက်သည်.. မိမိအိပ်ခန်းထဲဝင်၍ လှဲလျှောင်းအနားယူလိုက်သည်.. ကြမ်းတပြေးထည်းဖြစ်နေ၍ တဖက်ခန်းမှ ငြီးသံလိုကြားရသဖြင့်ချောင်းလိုက်ရာ.. “အိုး..ခိုင်မော့…အပြာကား မကြည့်ရတာကြာပီဖြစ်သောမင်းမင်း.. ထီပေါက်လေသည်.. ပြတင်းပေါက်ဘက်ခေါင်းထားကာ သူချောင်းသည့်ဘက်ခြေဆင်းထားသောကျော်ကြီးနှင့် ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးနှင့် ပုလွေပေးသော မထား..လက်ခြောင်းသွယ်သွယ်လေးများက စပ ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် အရည်ဖြူလေးများပင်ထွက်နေလေသည်.. ဒူးကားဖင်ကုန်းထားခြင်းကြောင့် နို့နှစ်လုံးတင်းတင်းကိုပါ မြင်နေရသည်.. ထရံ၏အောက်ခြေမှာ သတင်းစာလွတ်သဖြင့် ချောင်းရအဆင်ပြေသည်..
မင်းမင်းပုဆိုးချွတ်ဖင်ကုန်းချောင်းရင်း.. လီးကိုခြေမှပင့်ကာ ဂွင်းတိုက်တော့သည်.. … မထား..လီးစုပ်နေရင်း တဖက်ခန်းမှခြေသံကိုကြားရသည်.. မင်းမင်းပြန်လာတာသိသည်.. လီးကို အားပိုသုံး၍ စုပ်လိုက်သည်.. “အား..ကောင်းလိုက်တာ..အား..အ့” ကျော်ကြီး အသံထွက်ပိုကျယ်၍ မင်းမင်းကြားနိုင်သည်ဟု ထင်လိုက်သည်.. “မိန်းမ အပေါ်က စောင့်ဟာ..အရမ်းထန်နေပီ”. . မထားလီးစုပ်တာရပ်ပီး..ခြေရင်းဘက်လှည့်၍..လီးကိုကိုင် အဖုတ်ဝတေ့၍ စောင့်ချတော့သည်..အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများမှာ ပြဲလန်မနေပါ ဖောင်းဖောင်းလေးနှင့် စိကပ်နေသည်.. ပေါင်နှစ်လုံးကိုဖြဲရင်းစောင့်သလို..လက်များကနို့ကို ပွတ်ခြေနေလိုက်သည်..
သူမမျက်လုံးများထရံဘက်ကြည့်ရင်း.. “အ့..အ့..ရှီး..ကိုကျော်အောက်ကပင့်လိုးပါ..အား..ကောင်းတယ်..” လိုးပွဲကြည့်ကောင်းနေသောမင်းမင်း.. ၇ လက်မခန့်လီးကြီးကို ဂွင်းအဆက်မပြတ်တိုက်နေပြန်သည်.. မထား မျက်လုံးများက သူဘက်ကြည့်နေ၍ ချောင်းတာသိပုံရနေသည်.. မထား သူ့ဘက်မျက်နှာမူပြီးကုန်းလိုက်ပြန်သည်.. ကျောသားဖွေးဖွေးနှင့် ဖင်ကားထားရာ.. ကျော်ကြီး အနောက်မှ မထား ရဲ့ခါးကိုကိုင်ပြီး လိုးပါတော့သည်.. နို့သားအိအိကြီးများလည်းခါရမ်းနေတော့သည်.. မထား ထောက်ထားသောလက်ကိုကွေးချလိုက်ပီးကြမ်းပြင်နှင့်ကပ်လိုက်ရာ မင်းမင်း ချောင်းကြည့်ပေါက်နှင့် တတန်းထည်းဖြစ်သွားတော့သည်.. ရမတ်ထန်သော မျက်လုံးများနှင့်မထားမှာ တအအ အော်နေရင်း လျှာလေးပင်အနည်းငယ်ထွက်နေသည်.. နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးနှင့်သွားဖွေးဖွေးကြောင့် မင်းမင်း မှာ အစုပ်ခံရရင် ဘလောက်ကောင်းမလည်းတွေးနေမိသည်..
ကျော်ကြီး မျက်စိမှိတ်အံကြိတ်ပီးအဆက်မပြတ်လိုးနေရာ သိပ်မကြာခင် လရည်များ ထွက်ကုန်သည်.. မထား မပီးသေးပါ ကျော်ကြီးက ပီးသွားသည်.. “မိန်းမရေ..သုတ်တွေ ထည့်လိုက်ပီနော် ကောင်းလား..” “အင်း..ကောင်းတယ်..ထပ်လုပ်ပေးပါ” “ခဏ အနားယူမယ် ညကျရင်ထပ်လုပ်မယ်ဟုပီလား”. . မထား အာသာမပြေပါ မျက်နှာလေးညှိုးသွားသည်.. မင်းမင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရသည်.. မထားစိတ်တိုင်းကျလိုးပေးချင်မိသည်… မိမိလည်းထုလို့မပီးသေးပါ..ကျော်ကြီးကအပီးမြန်၍ ပွဲကရပ်သွားရသည်… အပြာကားကြည့်ရင်း မီးပျက်သွားသလိုခံစားနေရသည်.. ကျော်ကြီး လီးတန်းလန်းနှင့်ပက်လက်အနားယူလိုက်ရာ ခနအကြာ ဟောက်သံပေး၍ အိပ်ပျော်သွားသည်.. မထား လည်းထမိန် ရင်လျှားဝတ်၍ နောက်ဖေးထွက်သွားတာတွေ့လိုက်ရာ …မင်းမင်း ပုဆိုးပြန်ဝတ်လိုက်သည်.. ထို့နောက် နောက်ဖေး သို့ထွက်၍ ထမင်းချက်ရန်ဟန်ဆောင်ကာ နောက်ဖေးသို့ထွက်လိုက်သည်..
..ရေကပြင်အောက်ရေချိုးနေရာမှာမထားထိုင်ပီးရေချိုးရန်ပြင်နေစဉ်.. “ဟာ မထား အလုပ်အစောကြီးပြန်တာလား” “ဟုတ်တယ်မင်းမင်းရေ..ဈေးဝယ်စရာလေးရှိလို့.ပြန်လာတာ”. .မထားလိမ်ပြောလိုက်သည်.. “ကျနော်လည်းထမင်းချက်ပီးဈေးဝယ်ရအူးမယ်” မင်းမင်း ပုဆိုးတိုတိုဝတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်. ငုတ်တုတ်ထိုင်လျှင်အောက်စလွတ်အောင်တမင်လုပ်လိုက်သည်.. နောက်ဖေးထမင်းချက်ရာနေရာမှာတခုထည်းဖြစ်ပီး သူ့မီးဖိုကိုယ့်မီးဖိုနှင့်ချက်ကြသည်.. မီးဖို နေရာနှင့်ရေချိုးရာ မှာ အထက်အောက်ဖြစ်သည်.. မထားရေချိုးနေရာမှကြည့်လျှင်ဒဲ့မြင်ရသည်..မင်းမင်း ငုတ်တုတ်ထိုင် မီးဖိုပြာများရှင်းနေရင်းအောက်စလွတ်တာ မထားမြင်နေရသည်.. လီးမှာထောင်မတ်နေပီး အမွေးများမရှိ၍ရိတ်ထားပုံထင်ရသည်.. မင်းမင်း မှာ မထား၏ရေစိုကိုယ်လုံးအလှကြောင့် လီးတောင်နေပီး လိုးပွဲကြည့်ထား၍အရှိန်ကမကျသေးပေ.. လရည်ကြည်လေးများပင်ထွက်နေသည်.
၇ လက်မ ကျော်ရှည်သောလီးမှာငရုတ်ကျည်ပွေ့အရွယ်ကြီးပီး လီးထိပ်မှာဒစ်လန်နေ၍ ထိပ်ဖူးကြီးမှာပန်းရောင်ထနေသည်..မထား ခိုးကြည့်နေရင်း ခံတွင်းခြောက်လာမိသည်..ရင်ထဲတလှက်လှက်တုန်၍ ခံချင်စိတ်ပေါ်လာနေသည်.. . မြန်မာမိန်းခလေးဖြစ်သည်ကတကြောင်းအိမ်ထောင်သည်မို့ ဖောက်ပြန်တယ်ထင်မှာမခံနိုင် အထင်သေးမှာစိုးနေပြန်သည်.. ရေချိုးနေရာမှာတခုထည်းဖြစ်၍မထားပီးလျင်သူရေချိုးရအူးမည်.. “မထား ဘယ်ဈေးသွားမှာလည်းဗျ..” “မီးခွက်ဈေး လေ..နင်ဘာဝယ်မလို့လဲ” “ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ..အဝတ်အစားလေးဝယ်မလို့ပါ” “ငါ ရေချိုးပီးရင်သွားမှာ..နင်လိုက်မလား” မင်းမင်းပျော်သွားသည်..အခွင့်အရေးရလေပီ.. “လိုက်မယ်လေ..ရေချိုးပီးရင်သွားကြတာပေါ့”. … … မထား ရေချိုးသနခါးလိမ်းအဝတ်လည်းပီး.. အိပ်ပျော်နေသော လင်တော်မောင်ကျော်ကြီးကိုနှိုး၍.. “ကိုကျော်ထအူးလေ ကျမဈေးသွားမလို့ရှင်ရောဘယ်သွားမှာလဲ” “ငါ လည်း မနက်ဖြန်အလုပ်နားတယ်..
မင်းမင်းအိမ်ခန်းရှေ့ကြည့်လိုက်ရာ ဖိနပ်မတွေ့ရ၍ ထွက်သွားတာသိလိုက်သည်.. “အဲ့ကောင် လိုက်မယ်ပြောပီးဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်”. . အမှန်တော့ မင်းမင်း ကားမှတ်တိုင်ကြိုရောက်နေသည်..အိမ်အတူထွက်လျှင် ကျော်ကြီးတမျိုးထင်မှာစိုး၍ရှောင်လွှဲထွက်ခြင်းဖြစ်သည်.. ..မှတ်တိုင်ခုံလေးမှာထိုင်နေသော မင်းမင်းကိုတွေ့လိုက်ရသည့်မထားပျော်သွားမိသည်.. “ဟဲ့ နင်က ကြိုစောင့်နေတာလား” “ဟုတ်တယ်အမရေ..အတူထွက်ရင်မသင့်တော်လို့ပါ”. . မထားနားလည်လိုက်သည် မင်းမင်း ဟာ အခြေအနေကိုနားလည်တတ်၍ မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်နိုင်သည်.. ထိုစဉ် ဘက်စ်ရောက်လာသဖြင့် ဈေးသို့ထွက်ခွာကြတော့သည်..
မိုးချုပ်စပြုနေလေပီ..ဈေးအတွင်းစည်ကားလွန်းလှသည်..ညဈေးတခုလိုဖြစ်နေ၍. အလုပ်နားချိန်ဈေးဝယ်သူများစည်းကားသိုက်မြိုက်နေလေသည်.. မထားနှင့်မင်းမင်း..အတူတွဲသွား၍ အလွန်ခင်မင်သော မိတ်ဆွေများပမာဖြစ်လာသည်.. လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ကြပီးပြန်ကြသည်.. ညမိုးချုပ်ပီဖြစ်သည်..လိုင်းကားမှာမြို့ထဲမှအပြန်ဖြစ်၍ အလုပ်ပြန်သူများနှင့်ကြပ်နေပြန်သည်.. မင်းမင်း မထားတိုးစီးရပြန်သည်.. မင်းမင်းထိုဂွင်ကိုသိ၍ အတွင်းခံဘောင်းဘီမဝတ်ခဲ့ပေ.. အခု မထား သူ့ရှေ့မှာ ရပ်နေပီးအပေါ်တန်းကိုင်ရန်ခက်ခဲနေသည်..
“အမ ဈေးအိပ် ကျနော့ကိုပေးထား.. အပေါ်ကိုပဲရအောင်ကိုင်..” “ကျေးဇူးပဲဟာ..ကြပ်လိုက်တာလွန်ရော” မင်းမင်းလက်တဖက်က အိပ်ဆွဲပီးတဖက်က အပေါ်တန်းကိုင်သည်. မထား မှာ လက်နှစ်ဖက်မြောက်သော်လည်မမှီသေး ထို့ကြောင့် မင်းမင်းလက်မောင်းကိုအားပြုကိုင်ရတော့သည်.. ကျောသားအိအိလေးနှင့်ဆံပင်စုစည်းထားသောကြောင့်ပေါ်နေသောဂုတ်သားလေးက မင်းမင်းကိုရာဂထန်စေလေသည်.. အောက်မှလီးစတောင်လာသည်.. အတွင်းခံမပါသောကြောင့် လီမှာတဖြောင့်ထည်း ဖြစ်လာပြီး မထား၏တင်သားအိအိကြီးကိုထိုးနေမိသည်.. “မထား ခွင့်လွှတ်နော် ကျနော် ဘောင်းဘီဝတ်မဝတ်ခဲ့မိလို့ခုလိုထိုးမိတာပါ”အသံတိုးလေးနှင့် သူမနားနားကပ်ပြောလိုက်သည်..
မထားဂေါင်းလေးညိတ်ပီး လီးနှင့်တင်သားနှစ်ခုကြားတည့်အောင်ချိန်ပေးလိုက်သည်.. ထိုသို့မလုပ်လျှင် တင်သားကိုထိုးမိနေ၍ အနေအထားမမှန်ပဲ သူ့လီးထိပ်နာသွားလိမ့်မည်.. မထား သိလိုက်သည် သူမ မင်းမင်းကို ခင်တာထက်ပိုမိနေပီ… ကားအတွင်းလည်းမှောင်နေသဖြင့်မည်သူမျှမမြင်နိုင်ပေ.. “မထား.ဒီဘက်လှည့်လိုက်ပါလား..ဆံပင်ကမျက်နှာနဲ့ပွတ်လို့ ယားနေတယ်..” မထားမငြင်းပါ သူ့ဘက်လှည့်လာသည်.. မျက်ဝန်းခြင်းစုံမိကြသည်..မထားမျက်ဝန်းလေးမှာ ဝိုင်းဝိုင်းလေးမို့ချစ်ဖို့ကောင်းလှသည်.. မင်းမင်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့သူမပါးလေးပကို နမ်းလိုက်သည်.. ခုတော့လီးမှာအဖုတ်နှင့်တတန်းထည်းဖြစ်နေလျက် ပိုမိုမာတင်းလာသည်.. ဆီးခုံကိုလာထောက်နေသောလီးကိုမထားအမြင်မတော်တော့ပါ..ထို့ကြောင့်.. သူမလက်တဖက်ကိုအောက်ချပီး လီးကို ပုဆိုးနှင့်ရောကိုင်၍ဂွင်းထုပေးနေမိသည်. ..
“မြန်မြန်ပီးနော် ဆင်းဖို့နီးလာပီ”. . မထား သူ့ပုဆိုးကို အပေါ်သို့မတင်၍.. လက်အတွင်းနှိုက်ကာ ခပ်သွက်သွက်ထုလိုက်တော့သည်.. လီးမှာတဆတ်ဆတ်တုန်းပီးလရည်များပန်းထွက်လာ၏.. ပေသွားသောလက်ကို ပုဆိုးအောက်ခြေနှင့်သုတ်လိုက်ပီးဘေးလူများမသိအောင် ပုံမှန်ပြန်နေလိုက်သည်.. “ကောင်းလား မင်းမင်း”. . “အင်း..ချစ်တယ်မထားရယ်..လိုးချင်တယ်”. . ရှူး…မထား မင်းမင်းပါစပ်ကိုပိတ်လိုက်ပီး.. “ဆင်းတော့မှပြော လူတွေကြားမယ်”. . … ကားမှတ်တိုင်ဆင်း​သောအခါ..မထားအရင်အိမ်သို့ပြန်ပီး.. မင်းမင်းမှာ ဆယ်ငါးမိနစ်လောက် လမ်းထိပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေလိုက်သည်…
ဒီညတော့ လိုးပရဇေ..မထားရယ်… ….မထား အိမ်ရောက်သောအခါ လင်တော်ကျော်ကြီးမှာ မူးနေလေပီ.. နှိုးလို့တောင်မရတော့..သူ့ကိုစောင်လေးခြုံပေးလိုက်ပီး..နောက်ဖေးသို့ထွက်ကာ မင်းမင်းအခန်းဘက်ကူးလိုက်လေသည်… … မင်းမင်း အိမ်ထဲဝင်လာလေပီ.. ဈေးဝယ်ထုတ်လေးဘေးမှချပီး. အိပ်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်ရာ..သူ့အိပ်ယာထည်းမထားရောက်နေသည်.. “ရှူး…လာ..လိုးခြင်တယ်ဆို”. . မထားအသံတိုးလေးနှင့်သူ့ကိုခေါ်နေသည်.. မင်းမင်း ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်သည်.. ထို့နောက်မထား၏ အဝတ်များချွတ်ပေးလိုက်သည်.. အမှောင်ညတခုလုံး တဖက်ခန်းမှကျော်ကြီးရဲ့ဟောက်သံက ကြိးစိုးနေလေသည်.. မထား၏ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းနှင့်ထိကပ်ပီး လျှာအချင်းချင်းစုပ်နေကြည်… လက်အသီးသီးမှာသိုင်းဖက်ထားကြပီး.. ခန္တာ ကိုယ်ခြင်းထိကပ်ပွတ်သပ်နေကြသည်..
မွေ့ယာအပါးလေးပေါ်မှာ လှဲလိုက်ကြပီး မထား၏ ဆီးခုံနှင့် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို ဘာဂျာပေးတော့သည်..အရည်များစိုနေ၍ ဆပ်ပြာနံကလေးသင်းနေသော စပလေးကို မင်းမင်းမြိုချမတတ် ယက်နေတော့သည်.. မထားကောင်းလွန်း၍အသံမထွက်နိုင်ပါ ခိုးစားခြင်းဖြစ်၍ အသံမထွက်ရဲ.. ချစ်လင်ကျော်ကြီးကိုချစ်သလို.. မင်းမင်းကိုလည်း စွဲမိပီ.. အစုပ်အမှုတ်ကြမ်းသောကြောင့်သူမ အရည်ပမ်းထွက်၍ပီးလေသည်… “မထား စုပ်ပေးနော်”. . မင်းမင်းရဲ့လီးကြီးကိုမထားစုပ်ပြန်သည်.. သိပ်မကြာပါ လရည်များပန်းထွက်လာ၍မြိုချလိုက်သည်… မထား ကုန်းပေး ပြန်သည်.. နွေးအိနေသော စပ အထိအတွေ့ကြောင့်လီးမှာမာကြောနေပီး အဖုတ်အတွင်းသို့အိခနဲတိုးဝင်သွားလေသည်.. စီးပိုင်နေသောအဖုတ်နှင့်ကြီးမားသောလီးကြောင့် ကာမအထွတ်အထိပ်ရောက်ပြန်သည်. မင်းမင်း အနောက်မှနေ၍နို့နှစ်လုံးကိုလှမ်းဆွဲကာ ခွေးလိုးလေး လိုးတော့သည်… မထား ခါးလေးကော့၍ ပြန်ပြန်တွန်းပေးနေလေသည်…
အွင်း…အွင်း…ရှီး… ပက်လက်ပုံစံပြောင်းလိုက်သည်… မထား၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုပုခုံးပေါ်တင်လိုက်သည်.. အမှောင်ကြောင့်အဖုတ်ကို ကောင်းကောင်းမမြင်ရ..မင်းမင်း လီးစအိုကိုထောက်မိသည်..ဖင်လိုးရန်အကြံရလိုက်သည်.. “မထား ဖင်လိုးချင်တယ် ခံဖူးလား” “မခံဖူးဘူး လုပ်ကြည့်လေ “လေသံလေးများနှင့်ပြောဆိုနေကြသည် သုတ်ရည်များကြောင့်ချောနေသောလီးမှာ ဆီထဲ့စရာမလို.. စအိုဝလေးကိုထောက်၍ဖိချလိုက်သည်.. ဒစ်ထိပ်ဝင်သွားရာ မထား ခါးလေးတွန့်သွားသည်.. ပထမဆုံးဖင်ခံရသဖြင့် အရသာတမျိုးရလေသည်.. ပုံမှန်လေးလိုးနေ၍ထပ်ပီးချင်လာသည်.. မင်းမင်းအလုပ်ရှုပ်နေသည်.. ဖင်းထဲလိုးလိုက် အဖုတ်ထဲလိုးလိုက်နှင့်ပေါ့.. “နင့်အရည်တွေ အပြင်မထုတ်ပါနဲ့နော်.. အဖုတ်ထဲပန်းထည့်ပေးပါ..ငါ နင့်ကလေးလိုချင်တယ်”. . မင်းမင်း သဘောတူလိုက်သည်.. နောက်ဆုံးတချီကို အဖုတ်ထည်းသီးသန့်လိုးပီးပီးချလိုက်တော့သည်…
သုတ်ရည်ပူပူလေးများအဖုတ်ထဲဝင်လာတဲ့အရသာက အင်မတန်းကောင်းလွန်း၍ မထားလည်းနောက်တကြိမ်ထပ်ပီးလေတော့သည်… “ချစ်တယ်ထားရယ်”. .”ငါလည်းချစ်တယ်.. ဒီလိုနှင့် မင်းမင်း နှင့်မထား ကြုံသလိုခိုးစားဖြစ်ကြသည်… ..လအနည်းငယ်အကြာ မထား ကိုယ်ဝန်ရှိလာသည်..ကျော်ကြီးခလေးလား..မင်းမင်းကလေးလားမသိရပေ.. မိန်းခလေးမွေးလာသည်… နာမည်လေးက..”သီရီမင်းကျော်”တဲ့.. မထား မှည့်ပေးတာဟုသိရသည်.. မင်းမင်းမှာအလုပ်ကြိုးစားစုဆောင်းပီးနိုင်ငံခြားထွက်ကာအလုပ်လုပ်တော့သည်.. ကျော်ကြီးမှာ ကလေးရပီးနောက်အရက်ဖြတ်လိုက်ပီး အလုပ်ကြိုးစားရာ ကိုယ်ပိုင်ကားနှင့်တိုက်နှင့် ကြီးပွားနေပီး မထားမှာ စတိုးဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားလေသည်. …..အခုတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရောက်လေပီ.. အချိန်ဆိုတာခဏလေးပါ….. အရာအားလုံးပြောင်းလဲလာသလို… သီရိမင်းကျော် (ခေါ်) သီရိလေးမှာ.. အပျိုးလေးပင်ဖြစ်လာလေတော့သည်…
. ၂ဝ၂၀ ခုနှစ်သို့ရောက်ခဲ့ပြီး.. မင်းမင်း..အမေရီကန် . .သို့ရောက်ရှိသည်မှာနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာခဲ့လေသည်.. မထားနှင့်ကိုကျော်ကြီးတို့မှာသူနှင့်အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြပီး အဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ကြပါ. ဖေ့ဘွတ် မတ်ဆင်ဂျာနှင့်ဆက်သွယ်၍. ဗီဒရိုကော များခေါ်သည့်အထိအဆင့်တက်လာခဲ့သည်.. မင်းမင်း ခုထိစင်ဂယ်ဖြစ်သေးသည်..ထို့ကြောင့်..တခါတလေ အရမ်းထန်လာရင်..မထားနှင့် ဆက်စ်ချက် ကြသည်..မထား၏် ကိုယ်တုံးလုံးပုံများမှာ မင်းမင်း ဖုန်းး မှာအများကြီးရှိလေသည်.. ..”မထား အားရင် ဗီဒရိုကော ပါ ဒီညထုချင်လို့” ..မထား ကလေးတယောက်အမေဆိုပေမဲ့နန်းမွေစံလို ဘော်ဒီမျိုး ကိတ်လာလေသည်..
ဒီနေ့လည် မထား အိမ်မှာလူရှင်းသည်.. ထို့ကြောင့် မင်းမင်းဆီဗီဒရိုကော လေသည်.. ဖုန်းး ကိုကုတင်ခြေရင်း မှန်တင်ခုံရှေ့ထောင်လိုက်ပီး..အဝတ်များချွတ်ထားလေသည်…စပြီ… မင်းမင်း..ဗီဒရိုကော ကိုင်လိုက်သည်… သူလည်းကုတင်ပေါ်မှာ လီးကို ထုတ်ကိုင်လိုက်ပီး.. “ထားရေ..ခရမ်းသီးနဲ့ထိုးပြပါ”. . “ဟဲ့..ငါလီးအတုဝယ်ထားတာရပီးအာ့နဲ့လုပ်ပြမယ်” “ဝိုး..ရှယ်ပဲ..ပီးအောင်လုပ်ပြနော်”. . မထားလီးအတုကိုအဆင်သင့်ကိုင်လိုက်ပီး ပါးစပ်နဲ့စုပ်ပြလေသည်.. အွင်း..ကိုမင်းရယ်.ပြန်လာပီးလိုးပါတော့.. ထား.ရေ ကို့လီးကြီးကြည့်ပါအူး.. အရမ်းကြီးနေပီ.. မင်းမင်း..ဂွင်းထုရင်သုံးသော ဂျယ်ကိုလီးပေါ်သုတ်လိုက်ပီးထုပါတော့သည်..
မထား လီးအတုကို..ကုတင်ပေါ်ထောင်လိုက်ပီးအပေါ်မှတက်ဆောင့်ရင်း…. အား..ကိုမင်း လိုးပါ..လိုးပါ… စိတ်အတွင်း မင်းမင်း လိုးသလိုခံစားပြီး.. ဖုန်းး အတွင်းမှ မင်းမင်း ထုပြတာကြည့်ပီး အော်ပြနေတော့သည်… ထို့နောက် လီးကို ထုတ်၍ ဖုန်းး ဘက်သို့ ဖင်ကိုလှည့်ကုန်းကာ လီးကို လက်ပြန်ကိုင်၍..အဖုတ်ကြီးကြားအဝင်အထွက်မှန်လိုးပြတော့သည်… ..ထားရေ..ဖင်လိုးပြပါ…အရမ်းကောင်းနေပီ…မထား အဖုတ်တွင်းမှထွက်သောအရည်များကို ဖင်စအိုဝမှာသုတ်လိုက်ပီး..လီးကို ဖင်ထဲထဲ့လေသည်…
မင်းမင်း ဖင်လိုးရတာအရမ်းကြိုက်သည် အဖုတ်မှာကြာကြာလိုးရင်ခြောင်လာ၍ အရသာပေါ့သည်..ဖင်စအိုမှာ မည့်သည့်အချိန်မဆို ကြပ်နေပီး..စုပ်အားပိုကောင်း၍လီးပိုကြီးသလို သုတ်ထွက်အရမ်းကောင်းလေသည်… မထား အဖုတ်မှာ ဟစိစိနှင့်အရည်များတစက်စက်ကျနေပြီ…ဖင်ထဲလီးတု နှင့်လိုးပြသလို လက်ခြောင်းသုံးခြောင်းမှာအဖုတ်ထဲသွင်းကာ လိုးရင် ပီးသွားတော့သသည်.. ထိုမြင်ကွင်းကြောင့် မင်းမင်း အထွတ်အထိတ်ရောက်ပီး..သုတ်ပန်းထွက်ပါတော့သည်…ထား..ရေ..ကိုယ်ပြန်လာတော့မယ်.. ထားအိမ်မှာ နေမှာနော် စီစဉ်ပေးထား.. ..”အိုကေ..ကိုမင်း..ရေ..လုပ်ထားမယ်”. . ထားရေ..သမီးပုံလေးတွေထပ်ပို့ထားအူး..သတိရလို့.. မထား ဖုန်းး မှ သီရိပုံများကို ပို့လိုက်သည်.. ..သီရိမင်းကျော်မှာခု အသက် ၂၄ အရွယ် အပျိုမလေးပါ..မထားငယ်စဉ်ကလိုခါးသေးရင်ချီ ပီး ဖြူဖြူအိအိလေးဖြစ်သည်. ကျော်ကြီး နှင့် မင်းမင်း တို့ လိုးပီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန်ရလာပီးမွေးထားတာဖြစ်သည်..
သီရိမျက်နှာမှာ မထားနှင့် တူနေ၍အဖေက ဘယ်သူမှန်းမသိရတော့ပေ.. ခုတော့အပျိုမ ဖားဖားကြီးဖြစ်နေလေပီ.. ..မင်းမင်း မှာသီရိပုံလေးတွေကြည့်ရင်း.. လိုးချင်နေမိသည်.. မထား နားလည်ပါသည်..မင်းမင်းခုထိအိမ်ထောင်မပြုပဲ..မိမိတို့မိသားစုအတွက် အများကြီး ကူညီခဲ့သူဖြစ်သည်.. “ထား..ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် သီရိလေးကိုလက်ထပ်ချင်တယ်”ဟု.. မင်းမင်းပြောဖူးသည်.. ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ့်အိပ်ထည်းပြန်ဖိတ်တာ အကောင်းဆုံးပါ.. မင်းမင်းအသက် ၄၅ နှစ်ရှိပီ..သီရိက ၂၄ ခုခေတ်က ဦးနဲ့သမီးတွေခေတ်.. မင်းအရင်လို အိမ်ငှါးငမွဲမဟုတ်တော့.. အမေရီကန် နိုင်ငံသားသဋ္ဌေးတယောက်ဖြစ်နေပီ. သမီးလေးသဘောတူရင် စီစဉ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပါ.. …သီရိ သည် ဦးမင်းနှင့် ဖေ့ဘွတ် မှာ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်. လူချင်းမတွေ့ဖူးပါ..မိဘနှစ်ပါး၏အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်သလို သူတို့မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးလိုဖြစ်နေသည်..
သူမပုံလေးတွေကိုအသဲလေးတွေပေးပီးကွန်မန့်အမြဲပေးတတ်သဖြင့် ကျေနပ်နေမိသည်.. ..ခုသူအလည်လာပီးအိမ်မှာနေမှာတဲ့လေ ရင်တော့ခုန်မိသည်.. ….ဦးနဲ့သမီးဇာတ်လမ်းလေးစကြစို့.. ကိုကျော်ကြီးစပယ်ယာအလုပ်မလုပ်တော့ပါ..သမီးလေးသီရိမွေးပီးနောက်..မင်းမင်း ငွေကြေးအကူအညီနှင့် ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်သည် ထိုမှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ စတိုးဆိုင်ကြီးဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီး.. ယခု သဋ္ဌေးကျော်ကြီးဖြစ်နေလေပီ.. ..ကျော်ကြီးရိုးသားလွန်း၍မထားနှင့်မင်းမင်း ငြိစွန်းတာမသိခဲ့ပေ… ဒီနေ့ မင်းမင်းအလည်ပြန်လာမည်.. မထားနှင့်သမီးသွားကြိုကြသည်.. မိမိမှာဆိုင်ထိုင်ရင်းကျန်ခဲ့သည်.. …မထားနှင့်သီရိ လေဆိပ်ရောက်နေသည်.. မကြာခင်လေယာဉ်ဆိုက်လာပီး ဆင်းသက်လာသောခရီးသည်များအကြား မင်းမင်းကိုတွေ့လိုက်၍ မထားအရမ်းပျော်သွားသည်… ခရီးကြိုသူများကြား ပါတိတ်ဝမ်းဆက်နှင့် လှပနေသော မထားနှင့်သီရိကို တွေ့လိုက်သည်… သားအမိဟုမထင်ရအောင် နုပျိုနေသောမထား နှင့် မြန်မာဆန်ဆန် ခါးသေးရင်ချီ တင်ကားနေသောသီရိ..မှာ အပြုံးများဖြင့်ဆီးကြိုနေသည်…
“မထားရယ်လှနေလိုက်တာ..သမီးလေးကလည်းအမေတူလေးနော်..နင်ငယ်ငယ်ကအတိုင်းပဲ.. ကိတ်နေလိုက်တာ”. .. မင်းမင်းမျက်လုံးများ သီရိ ကိုယ်ပေါ်ကမခွာ တာ မထားမြင်ရ၍မနာလိုဖြစ်ရပြန်သည်.. “ကိုမင်း အိမ်ပြန်ကြစို့ မိုးချုပ်တော့မယ်” သီရိလေးမှာ မင်းမင်းခရီးသွားအိတ်ကိုဆွဲယူပြီးအရှေ့မှ အရင်သွားလိုက်သည်.. သီရိနောက်ပိုင်းအလှ တင်သားအိအိကြီးများမှာ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်ဖွံထွားနေကြသည်… “ရအောင် လိုးမည်ဟုစိတ်ထည်းတွေးရင်း ..”မထား ငါ နှစ်လ ပဲ ဗီဇာ ခွင့်ရတာ.. ငါ့ကို မြန်မာပြည့်အနှံအလည်ပို့ပေးနော်” “အေးပါ..မနက်ဖြန်ချောင်းသာ အရင်သွားကြတာပ့”. . “နင်အရင် လို လှနေတုန်းပဲသလား.. ပီးတော့ ပိုကိတ်လာတယ်..အားရပါးပ လိုးချင်တယ်”. . မထားပြုံးနေလိုက်သည်ပေါ့…မိနစ်၃၀အကြာနှစ်ထပ်တိုက်လေးတခုထည်းရောက်လာသည်..
သီရိ အပေါ်ထပ်သို့တက်သွားပြီး… “အမေ သမီးခေါင်းမူးနေလို့ ခနအိပ်မယ်နော်..” “အေး..အေး..လာကိုမင်းနေဖို့အခန်းပြမယ်”. .အိမ်အောက်ထပ်အခန်းနှစ်ခုရှိသည် တခန်းက မထားတို့လင်မယားအခန်း.. ဘေးချင်းကပ်အလွတ်ခန်းတခုမှာ မင်းမင်းနေရန်စီစဉ်ထားလေသည်.. ဦးကျော် ည၉နာရီမှဆိုင်ပိတ်ပြန်လာမည်ဖြစ်သည် ခုမှ ၇ နာရီသာရှိသေးသည်.. ..အခန်းတွင်းရောက်သည်နှင့် မင်းမင်းတံခါးကိုလော့ချလိုက်ပီး မထားကိုသိုင်းဖက်ကာ အငမ်းမရနမ်းလေသည်… နှစ်ပေါင်းများစွာခွဲခွာနေရသော ချစ်သူလင်ငယ်ရဲ့ လီးကိုတောင်းတနေတာကြာလှပေပီ.. အဝတ်များကိုအမြန်ချွတ်၍နှူးနပ်မနေတော့ပဲ ကုတင်စောင်းမှာ ပင် မထားကိုမတင်၍ ပေါင်နှစ်လုံးမက.. လီးကိုအဖုတ်ဝတေ့ပီးလိုးချတော့သည်..
..အား..ဖြေးဖြေး..နာတယ်ဟ..ကြပ်လိုက်တာ.. မထား ခံချင်တာပဲသိသည် ငယ်ငယ်ကလိုအရည်သိပ်မထွက်တော့ပါ အသက်၄၀ ကျော်ပီဖြစ်သည်.. မင်းမင်းလီးမှာ အမေရီကန် မှာနေစဉ်က လီးကြီးရှည်ဆေးသုံးထား၍.. ၈လက်မခန့်ရှိကာ..လုံးပတ်မှာ..ငရုတ်ကြည်ပွေ့လောက်ဖြစ်ပီး မာထန်နေသည်.. ဗြစ် ဗြစ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ်ဖတ်… လဥနှင့်တင်ပါးရိုက်သံများထွက်လာသည် အဖုတ်ကြီးမှာ လီးကိုအတင်ညစ်နေ၍ လိုးလို့ကောင်းလှသည်.. အား..ကောင်းလာပီ..ဆောင့်ဆောင့် အမေ့..အ့..ကိုမင်း နို့စို့ပေးရင်းလိုး… မင်းမင်းနို့ကုန်စို့ပီး အရူးအမဲသားကြွေးသလို ဖြစ်နေသည်.. .
..မထားကို ဆွဲလှည့်ပီး ကုတင်စောင်းမှာမှောက်၍..ပေါင်ကိုဖြဲကားကာ ဖင်လိုးပါတော့သည်… အား..ရှီး..ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ်..စအိုတွင်းလေများ ဆက်တိုက်ထွက်လာသည်.. မထားခါးကိုဖိ၍..ကော့လာသောဖင်ကြီးကို ရမက်ထန်ထန်ကြည့်ပီး..ဆောင့်တော့သည်…ဘွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်.. …. သီရိ လေဆိပ်ကအပြန်ကားမူးလာပီးအိပ်ချင်လာမိသည်..အိပ်ယာထဲလှိမ့်နေရင်းသေးပေါက်ချင်လာသဖြင့် အောက်ထပ်ဆင်းလာခဲ့သည်… အမေနှင့်ဦးမင်းကိုမတွေ့ရ… အိမ်သာရေချိုးခန်း၏ဘေးအခန်းမှ ငြီးသံ ကြားရသဖြင့်ကပ်နားထောင်လိုက်ရာ.. မိမိ မိခင်ရဲ့အသံနှင့် လိုးသံများကြားရတော့သည်.. သီရိ ခေတ်လူငယ်အပျိုမဖြစ်သည်.. မိန်းခလေးသူငယ်ချင်းများဆုံလျှင်ကာမအကြောင်းပြောတတ်ကြသလို.. တခါတလေ အွန်လိုင်းမှအောကားများလည်းခိုးကြည့်ဖူးကြသည်..အခုကြားရသောအသံများမှာ အောကားအတွင်းမှအသံများနှင့်တူနေသဖြင့် အခန်းတွင်းလိုးနေကြတာသိလိုက်သည်.. .
သီရိသေးပေါက်ချင်စိတ်ပါပျောက်သွားပီး အောကားအတွင်းမှလိုးကွက်များစိတ်ထည်းပေါ်လာသလို အခန်းတွင်း ဘလိုလိုးနေမလဲတွေးရင်း.. အဖုတ်လေးကိုပွတ် နို့လေးကိုပွတ်၍..ဍ္ဍဍ္ဍဟ တခါးနားကပ်နားထောင်လေသည်.. …လိုး..လိုး..ဆောင့်လိုး..ကိုမင်း..ထားအရမ်းကောင်းပီ… ကြိုက်လားမထား..လီးလာစုပ်ပေး.. ပီးရင် ထားအကြိုက်အပေါ်ကဆောင့်… ..သီရိ တဏှာထန်ထန် စကားများကြားနေရ၍..တကိုယ်လုံးပူတတ်လာသည်.. အစိလေးကို ဖိ​ချေကြည့်ပီးဆက်လက်ပွတ်နေမိရာ ဒူးကလေးပျော့ခွေသွားပီးစောက်ရည်များထွက်လာတော့သည်…
..မထားမှာ အစုပ်ကောင်းလှ၍ မင်းမင်း သုတ်ရည်များ မထားပါးစပ်ထည်းပန်းထည့်လိုက်သည်. လီးမှာညိုးမသွားပါ..မာထန်နေဆဲဖစ်သည်..ကုတက်ပက်လက်လှန်ပေးရာ မထားအပေါ်မှဆောင့်တော့သည်… အား..အ့အ့..မင်းမင်းအလိုက်သင့်လေးကော့ပေးသဖြင့်လီးမှာတဆုံးထိဝင်ပီးသားအိမ်ကိုပါထိမိသည်.. သိပ်မကြာပါ မထား ပီးသွားပီ.. …ကိုမင်းရယ် ကောင်းလိုက်တာ.. မပြန်ခင်အဝလိုးပေးနော်… အင်းပါ..ထားရယ်… ..”မနက်ဖြန်ချောင်းသာသွားကြမယ်နော် သမီးကိုပါခေါ်ခဲ့”. . သီရိကြားလိုက်ရသည်..ခြေသံလေးဖော့ပီးသေးသွားပေါက်ကာ..အပေါ်ပြန်တက်သွားလေသည်…. …နောက်တနေ့..အိမ်သားများမနက်စာစားရင်းဆုံကြသည်.. “ကိုကျော် ကျမတို့ ချောင်းသာသွားမလိုရှင်လိုက်မလား” “ငါမလိုက်အားဘူးလေ ဆိုင်ကတဖက်နဲ့ ဒီကောင်ကြီးကိုနင်ပဲလိုက်ပို့လိုက်ပါဟာ” “သီရိ လည်းလိုက်ခဲ့ အပျင်းပြေတာပေါ့”. . “ဟုတ် မေမေ..လိုက်မယ်..ဦးမင်းကြိုက်ပ့မလား” သီရိမသိသလိုအထာနှင့်မေးလိုက်သည်..
“ဟာ..သမီးလိုက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ ဦးမှာက သားသမီးမရှိ တယောက်ထဲသမီးအဖြစ်မွေးစားဖို့တွေးနေတာ”. . “ရော့သမီး..ဒါက သမီးအတွက်ဝယ်လာတာ..” မင်းမင်း စက်ပရိုက် အနေအထားနှင့် သူမအရှေ့ဘူးလေးတခုလာချပေးသည်.”ဝိုး..အိုင်ဖုန်း ၁၁ ပရိုမက် ဖြစ်နေသည်. နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းဖြစ်၍ အရမ်းပျော်သွားသည်.. “ဟျောင့်..သားရီး မင်းတူမကိုအလိုမလိုက်နဲ့..မင်းရှိတာကုန်သွားမယ်” “ရပါတယ် ကိုကျော်..ကျနော်မှာပေးစရာလူမှမရှိတာ သီရိစိတ်ချမ်းသာရင်ပီးရော”. . သီရိ သဘောပေါက်လိုက်သည် ဦးမင်း၏အပေးကောင်းမှုကူညီမှုများကြောင့် အမေ စွဲသွားတာဖြစ်ရမည်.. ..မထား ကားလက်မှတ်ကို ဖုန်းး ဖြင့်လှမ်းမှာလိုက်ရာ သုံးစောင် နှစ်ခုံတွဲတခုနှင့် ရှေ့ခုံတခုရသည်.. “ကဲ.. ကိုမင်းရေ..သွားဖို့ပြင် လက်မှတ်ရပီ သီရိယူစရာရှိတာယူ တော့ သွားကြမယ်” ညဘက်ထွက်သောကားဖြစ်သည်.. အဝေးပြေးကား အလည်ပိုင်းနှစ်ခုံမှာ. သီရိက ပြတင်းပေါက်ဘက်ထိုင်သည်.. မထားကဘေးမှာထိုင်သည်.. ကိုမင်းတိုင်ပတ်လေတော့သည် သူ့ဘေးပြတင်းမှာအဖွားကြီးတယောက်ထိုင် ၍ အပြင်လေမရ ခေါ်င်းမူသလိုဖြစ်နေသည်..
“မထားရေ..နေရာလဲရအောင်ဟာ.ငါနဲ့သီရိနဲ့အတူထိုင်ပီး..ပြတင်းပေါက်ဘက်တယောက်တလှည့်ချိန်းမယ်လေ.. ငါအသက်ရှူကြပ်လို့” မထားကသဘောတူလိုက်ပီး နေရာလဲပေးလေသည်.. ကားမှာ ညဘက်မောင်းသဖြင့် အနည်းငယ်နှေးသည်..ရှေ့ခုံမှ..မထား ငိုက်နေလေသည်.. သီရိမှာ အသစ်ရသောအိုင်ဖုန်းနှင့်ရှုပ်နေသည်.. “ဦးကူညီပါအူး..သမီးမလုပ်တတ်ဘူး.. တရုတ်ဖုန်းသာအမြဲကိုင်သဖြင့် အိုင်ဖုန်းစက်တင်ကိုသူမ မသိပါ.. “အေး..ပေး..သမီး..”ဦးမင်းဖုန်းစက်တင်အမျိုးမျိုးပြင်နေသည်.. သီရိမှာ သိချင်မိ၍မင်းမင်းဘက်ခါးလှည့်ပီးလိုက်ကြည့်​နေသည်… သီရိရင်သားအိအိလေးမှာ မင်းမင်းလက်မောင်းကို ဖိပွတ်သလိုဖြစ်နေသည်… မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်၍ပုဆိုးပြန်ဝတ်ထားပေမဲ့ အောက်ခံဝတ်တာမကြိုက်သောမင်းမင်းမှာ သီရိနို့သားကြောင့်လီးတောင်လာတော့သည်..
မင်းမင်းအချိန်ဆွဲရန်ဂွင်ဆင်လေသည် ” အကောင့်ဖွင့်ရမယ်သမီးရဲ့ ဒါမှ လိုချင်တာဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရမှာ. သမီးလိုက်ကြည့်ထားနော်.ဦးလုပ်ပြမယ်” “ဟုတ်ဦး..တခုဆီပြနော် သမီးကမေ့တတ်တယ်” ထိုသို့ပြောပီး..ခြေထောက်တဖက်ခုံပေါ်တင်ကာ မင်းမင်းဘက် ဘေးတိုက်လှည့်ထိုင် ဖုန်းး မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်နေလိုက်သည်.. ပုဆိုးကပုံစ အောက်မှာလီက အမြောင်းလိုက်ပေါ်ထွက်ပီးထောင်လာသည်..အဝေးပြေးကားများမှာ ညချိန်တွင်ခရီးသည်များအိပ်လို့ရအောင် မီးကိုပိတ်ထားတတ်ကြသည်.. ရုတ်တရက်ကားကွေ့လိုက်သည်.. “အမေ့…”သီရိငိုက်ခနဲယိုင်သွားသဖြင့်လက်ထောက်လိုက်စဉ်.. မင်းမင်း ပေါင်နှင့်လီးပေါ်လက်ကရောက်လေသည်.. ကံတရားက အဲ့လို..သီရိလက်ကလီးပေါ်မှချက်ချင်းမဖယ်.. ခပ်နွေးနွေးလီးကြီးက မာကြောနေသည်..ပုဆိုးအပေါ်မှကိုင်မိသည်ဖြစ်၍..လီး ဆိုက်ကို မမြင်ရပေမဲ့ ကြီးရှည်ထွားကြိုင်သောလီးမှန်းသိလိုက်သည်…
“အ..နာတယ်..”မင်းမင်း ဖုန်းး ပွတ်နေရာမှတချက်ထငြီးသည်.. “ဦး ဆောရီး နော် ကားကွေ့လိုက်လို့.ပီးတော့ဦးက အတွင်းခံလည်းမပါ..” “ဟုတ်တယ် သမီး.ထိပ်အရမ်းနာပီးအောင့်သွားတယ် ဦးဟာက ကြီးတော့ ဘောင်းဘီဝတ်ရင်ပူလို့ပါ”. မင်းမင်းလီးမှာ လက်ဖဝါးနုနုလေးကိုင်ထား၍တဆတ်ဆတ်တုန်ပီး ပါးပြင်းထောင်ထလာသည်. မင်းမင်းနာချင်ဟန်ဆောင်၍ငြီးပြနေသည်.. “သမီးလည်းမလုပ်တတ်ဘူး..အောင့်နေတာလား ..”လီးကြီးမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေသဖြင့်သီရိလန့်ပီးလွှတ်လိုက်သည်..
“ဦးပြောပြမယ် သမီးလိုက်လုပ်ပါ..ဦးကဖုန်းဆက်တင်လုပ်ရအူးမယ်” “ဟုတ် ဦးပြော..”မင်းမင်းထရပ်လိုက်ပီးခေါင်းပေါ်အိတ်ထားသောနေရာမှ ခရီးဆောင်အိတ်လေးကိုယူလိုက်ပီးအတွင်းမှတံဆိတ်မပါသော လက်ညှိုးအရွယ်ပုလင်းလေးကိုထုတ်၍ သီရိကိုပေးလိုက်သည်.. “အဲ့တာ လေးလိမ်းပေးနော်..” မင်းမင်းပြန်ထိုင်၍ကပုံစကိုဖြည်ပေးလိုက်သည်.. “အဲ့ဆီလေး လက်ထည်းထဲ့ပီး ဦးဟာကိုလိမ်းပေးပါ သက်သာလာမှာ.. အားကျွစ်ကျွစ်..” သီရိ ကယောင်ကတန်းနှင့် ဆီကိုလက်ထည်းထဲ့၍ ပုဆိုးအောက်မှလီးကြီးကိုဆီသုတ်လိုက်သည်..
ထိုဆီမှာမင်းမင်းအမြဲသုံးနေကြလီးကြီးသန်ဆေးဖြစ်သည်.. သီရိမှာလီးအတွေ့အကြုံမရှိ၍ ဘာမှနားမလည်ပေ.. အောကားကြည့်ဖူးသော်လည်းလိုးကြတာပဲသိသည်..လီးနာသွားတာမကြည့်ဖူးပေ….(လီးမာဆက် ကားကြည့်ဖူးရင်သိမှာဖြစ်သည်). . “သမီး နည်းနည်းလေးညစ်ပီး ပရုတ်ဆီလိမ်းသလို လုပ်ပါနော် ဦး ဖုန်းး ထည်း လိုတာတွေဒေါင်းလုပ်ရအူးမယ်”. . သီရိ ဘာမှ မပြောတော့ပါ တကိုယ်လုံးပူလာသလိုဖြစ်ပီး.. စပ အတွင်းယားလာတာပဲသိတော့သည်. ဦးမင်းဘေးလူများမမြင်အောင် ခြေထောက်တခြောင်းခုံပေါ်တင်၍ထောင်ကွယ်ထားလိုက်သည်.. လီးမှာပူလာသဖြင့် ပုဆိုးကို ဖြေလျှော့ကာလီးကိုထုတ်လိုက်တော့သည်..လီးထိပ်ဖူးဒစ်ကြီးမှာနီညိုရောင်ကြီးနှင့် အရည်ကြည်လေးများပင်ထွက်နေသည်. သူမ ယခု ဂွင်းထုပေးနေမှန်းမသိ အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲနေသည်..
ဦးမင်းမင်း ဖုန်းး ကို မဲကြည့်နေသဖြင့်သူမရဲ့လက်တဖက်က စပလေးဆီ အလိုလိုရောက်၍ ပွတ်နေသည်.. “သက်သာတော့မယ်သမီးရေ..ကျေးဇူးပါ” သမီးအခု ယားနေတယ်မဟုလား.. ဟုတ်ဦး.. လာ ဦးလုပ်ပေးမယ် အပြန်အလှန်ပေါ့နော်.. စကားဆုံးသည်နှင့် လက်တဖက်ကလျင်မြန်စွာစပဆီရောက်သွားသည်.. အစိရှိရာနေရာသို့စမ်း၍.. ဖိပွတ်ပေးလိုက်ရာ..သီရိ…အင်း..ခနဲ.. တွန့်သွားပီး..မင်းမင်းပုခုံးပေါ်မှီချလိုက်သည်…အခြေအနေကောင်းလေပီ… သီရိ နှုတ်ခမ်းဖူးလေးကိုဆွဲနမ်းပစ်လိုက်ပီး.. လီးကိုင်ထားသောသူမလက်ကိုအထက်အောက် လုပ်စေသည်…
“ချစ်တယ်သမီးရယ်..လက်ထပ်ပရဇေနော်”. . သူမ မျက်လုံးကလေးမှေးပီး ခေါင်းမော့ပေးသည်..လုပ်ချင်တာလုပ်ပါဆိုတဲ့သဘော… လီးထိပ်မှာ အရည်လေးများအဆက်မပြတ်ထွက်နေ၍ချောမွတ်နေလေသည်.. “သမီးရယ်..ဦးဟာ မြန်မြန်သက်သာအောင်စုပ်ပေးပါလား” “ဟာ..ဦးကလည်း..လူညာကြီး..မစုပ်ချင်ဘူး..ဆီတွေနဲ့..” “ဆီက ခြောက်သွားပီသမီးရဲ့အဲ့တာ.. သုတ်ရည်ကြည်လို့ခေါ်တယ်..သမီးအဖုတ်လေးလည်းအရေထွက်တယ်မဟုလား တူတူပဲလေ..စုပ်ပေးနော်”. . သီရိ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ဦးအလိုကျလုပ်ပေးချင်လာသည်.. အဲ့တာ..အချစ်လား..မေမေ..အရမ်းကြိုက် အရမ်းကောင်းပါတယ်လို့.. အော်ဟစ်အလိုးခံတာကြားကတည်းက.. သူမ..မေမေ့ကိုမနာလိုဖြစ်မိခဲ့သည်.. ခုတော့ အဲ့လီးကြီးကိုသူပိုင်ရတော့မည်..
ခွင့်လွှတ်ပါမေမေ..သမီး..ဦးကိုချစ်မပီ.. သီရိ မျက်လုံးကလေးကိုမှိတ်လိုက်ပီး.. ..ဦးရဲ့လီးကိုအသာလေးငုံစို့ပေးလိုက်လေသည်… မင်းမင်း..လောက်ပျော်နေသောသူ.. ရှိမယ်မထင်ပါ..နှစ်ပေါင်းများစွာ..မထား၏တိတ်တိတ်ပုန်းလင်ငယ်လို သစ္စာရှိစွာ ချစ်ခဲ့သည်..သီရိလေးကို စမြင်ကထည်းက မထားရဲ့ ကိုယ်ပွားလေးလို ချစ်မိခဲ့ပြန်သည်.. သစ္စာရှိခြင်းတန်ဖိုးကိုသူပြန်ရလေသည်.. …ဦးရဲ့လရည်တွေကျမအာဂေါင်ထည်းတိုးဝင်လာသည်..ထွေးမထုတ်ရက်ပဲမျိုချလိုက်မိသည်.. မထား အစောကြီးထည်းကနိုးနေပါသည် မင်းမင်း သူ့သမီးကို နမ်းလိုက်စဉ်ကပေါ့ အိမ်ချင်ယောင်ဆောင်ပီး ရှေ့ခုံနှစ်ခုကြားလေးမှချောင်းကြည့်နေခဲ့သည်..သီရိ လီးစုပ်ပေးသည်အထိပေါ့.. မထားမျက်ရည်ဝဲမိလေသည်..ပီတိမျက်ရည်ပါ..နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောလီးကြီးကိုသမီးဆီ အမွေးပေးလိုက်ရ၍ နှမြောသလို သမီးဘဝအတွက်စိတ်ချရပါပီ… …ချောင်းသာသို့ရောက်လေပီ… သုံးယောက်သားပျော်ရွှင်စွာလည်ပတ်ခဲ့ကြပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့သည်..
“မင်းမင်း နင် သီရိကိုလက်ထပ်ပီးရင် ငါ့ကိုမေ့သွားမှာလား”. . “ဟာ မဟုတ်တာ နင်က ငါ့အချစ်ဦးလေဟာ”. . အလည် ဗီဇာ နှစ်လ မပြည့်ခင်မင်္ဂလာပွဲလေးအကျင်းချုံးလုပ်လိုက်သည်.. မင်္ဂလာဦးည..သာယာပေစွ… သီရိမှာ အစွမ်းကုန်လှနေလေသည်.. မင်္ဂလာ ကုတင်ဘေးမှာခေါင်းလေးငုံ့ပီးရှက်နေသည်..မင်းမင်း မင်္ဂလာ ဝတ်စုံကိုချွတ်ချလိုက်သည်.. သီရိလေးကို ပက်လက်လှန်ကာ.. ပါကင်အဖုတ်လေးကိုနမ်းရှိုက်လိုက်သည် လျှာကြမ်းကြီးဖြင့် အဖုတ်ကွဲတလျောက်ယက်ချလိုက်ရာ သီရိ နတ်ပြည်ရောက်သလိုခံစားနေရသည်.. ပန်းရောင်နို့သီးခေါင်းလေးကိုငုံစို့ပေးပြန်သည်…ထို့နောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကစ်ဆင် ရိုက်ပီး..အမွေးနုလေးအောက်ရှက်ရွံကာစိနေသောအဖုတ်လေးကို လီးမာကြီးနဲ့လိုးချလိုက်ပါတော့သည်.. ဗြစ် ဒုတ် အား…. …သီရိ မျက်ရည်လေးဝဲလာပီး… “ဦး..သမီးကို.. ပစ်မသွားနဲ့နော်”ဟုပြောရင်း မင်းမင်း ကိုတင်းကြပ်စွာဖက်လိုက်လေတော့သည်။….ပြီးပါပြီ။.ရွှေကြာမြိုင်